Izizathu zokuthi awukwazi ukuqala inja
Sonke ngezinye izikhathi siphupha ngesilwane esincane. Izingane zibona ekuzijabuliseni kwenja, abantu abadala - ababalekela ekubeni nesizungu nanoma yini enye. Kodwa ngaphambi kokuba uqale inja, kufanele ucabange ngokucophelela, ngoba lokhu, ngaphezu kwakho konke, umthwalo omkhulu.
Nazi ezinye izizathu zokuthi awukwazi ukuqala inja.
Uma kufika inja uzokhohlwa ukuthi yikuphi ngempelasonto. Nsuku zonke, ekuseni nakusihlwa ukuhamba kuzokulinda. Futhi eside futhi egcwele, ngokuphonswa kwenduku engaphendukiyo, egijima emva kwezinja nezinye amakati, nezinye eziningi. Kuzodingeka uhambe nenja kunoma yisiphi isimo sezulu, kungakhathaliseki ukushisa, imvula noma kubanda. Ungakhohlwa ngokulala okuvamile, kusukela manje uzolala njengenja yakho futhi uvuke ngaphandle kwewashi, ngokucabanga ukuthi udinga isikhathi sokuhamba ngaphambi komsebenzi.
Ngizokhohlwa ukuhamba ngebhizinisi namaholidi. Ukuthwala inja ohambweni kuyinto edabukisayo kakhulu, futhi ukuthola indawo yakhe yesikhashana kuyoba nzima kakhulu. Okufanayo kusebenza kuwo wonke amaqembu, amaqembu kanye nezinye izinto. Uzokhathazeka ukwedlula lapho inja yakho ihamba khona noma idla, futhi hhayi uhlobo luni lokuthenga noma ukugqoka. Kusukela emaphakathini uzoshiya kakhulu ekuqaleni, ukhumbule ukuthi inja yonke usuku ehlezi yedwa ekhaya. Ngokushesha ngeke umenywe noma kuphi.
Ingxoxo ehlukile idla isilwane sakho. Uma unquma ukuba ne-puppy, kuzodingeka uqaphele ngokucophelela umsoco wakhe. Ukuze ukhule unempilo futhi uqine, kuzodingeka ufunde ukuqonda izithako ezihlukahlukene namavithamini. Ukubikezela lapho ukudla inja ingagula khona. Ekugcineni, qiniseka ukuthi uhlale unikeza ukudla, futhi akudingeki ukuba ugijime phakathi nobusuku ekudleni isitolo samahora angu-24.
Enye iphuzu elibaluleke kakhulu impilo yesilwane sakho. Ngaphezu kokuthi kufanele ugeze, sula izandla ngemuva kokuhamba emvuleni, kuzodingeka ufunde ukukala ukushisa kwakhe, ukuqonda izimpawu ezihlukahlukene zezifo. Ngokuphindaphindiwe kuyodingeka uvakashele udokotela wezilwane ukwenza inja yonke imishanguzo efanele.
Ngaphezu kwalokho, kudingekile ukucabangela uhlangothi lwezimali kule nkinga. Kuzodingeka uchithe imali ngokudla, izitsha, imikhiqizo yokuhlanzeka, okungenani kwizesekeli ezidingekayo kakhulu - ikolera futhi uqoqe, ngezinsizakalo zedokotela wezilwane, uma isilwane sakho siphula ngokuzumayo sigula nezinye izinto eziningi.
Kusukela ohlangothini lwengqondo, lungela umuzwa wecala njalo. Ngenxa yokuthi inja ihlezi ekhaya usuku lonke, ngoba usemsebenzini, akekho odlala nayo, ayithathi ukuhamba. Futhi uma ufika ekhaya usuka emsebenzini ukhathele, uzofuna ukuhlala uthule, uphumule, futhi awunakwenzeka ukuhamba ukuhamba okugcwele nenja.
Izizathu zokuthi kungani ungeke uqale inja ukungafuni kwakho nokungafundiwe ukuhlanza nsuku zonke. Imfumba yeboya ngefenisha, iphepha lodonga, i-pogrezennye izinto - konke lokhu kuqinisekisiwe kuwe. Ungakhulumi ngemidwebo engcolile ephepheni ngemuva kokuhamba kwesikhala slushy. Ngakho-ke, ungaqali inja, uma uphelelwa yinoma iyiphi i-speck emaphepheni. Ngaphezu kwalokho, inja ingabamba izitebe zakho ezizithandayo noma i-slobber ijazi elibizayo, ngokuphelele ngaphandle kwenhloso enonya.
Thola ukusetshenziselwa ukukhazimula, ukukhala nokukhala. Ukukhalaza komakhelwane ukuthi isilwane sakho siphazamisa ukulala noma ukubukela uchungechunge oluthandayo lwe-TV. Funda ukukhuluma nabangani be-janitors nabadlula, abazokwenza zonke izinhlobo zezicelo mayelana nenja yakho nokuziphatha kwayo.
Mhlawumbe kuzodingeka uchithe imali enkulu ekuqeqesheni nasekufundiseni izinja. Futhi akulona iqiniso lokuthi bazokwenza umphumela. Ngokuvamile, ukukhulisa inja kuyinto enzima kakhulu. Kuzodingeka umfundise ukuba angagxumi kuzivakashi nakudlula, ufunde ukuhlukanisa izinja ngesikhathi sokulwa nokunye okuningi. Inja idinga ukukhulumisana okuqhubekayo nokukhuliswa, ngaphandle kwalokho ekugcineni kuzophuka ngokuphelele ezandleni, kuzokwenqaba zonke amaqembu akho futhi awukwazi ukubhekana nayo.
Lokhu akuzona zonke izizathu zokuthi kungani kungcono ukungabi nenja. Isibonelo, isizathu sokuvinjelwa kungaba yisithintelo - uma unomuntu emndenini wakho owesaba noma engathandi izinja. Noma uma othile ovela emndenini enesifo sengqondo sokushaya izinja.
Futhi, ungaqali inja, uma umndeni unezingane ezincane, kungaba yingozi. Ayaziwa ukuthi inja izoyithinta kanjani ingane, ayikhishwa ukuthi uzoba nomhawu futhi ngenxa yalokhu kuyoba nobudlova kumntwana. Kuyafaneleka futhi ukucabangela imithetho yokuhlanzeka, ngokubonakala kwenja endlini kuyoba amagciwane amaningi kanye nokungcola, futhi lokhu kungalimaza ingane yakho.
Futhi, ungaqali inja uma usuvele unezinye izilwane ezifuywayo, njengekati, noma enye inja. Izilwane ngezinye izikhathi zikhwele kakhulu futhi zinzima ukuhlangana.
Ngaphezu kokuphepha kwezezimali, kufanele ube nezimo zokuphila ezikhululekile ukuze inja ingabi yisithiyo kuwe noma amanye amalungu omndeni. Ngaphezu kwalokho, ukubeka inja endlini, kuzodingeka ukhethe indawo lapho angasabela khona futhi aphumule, futhi ngesikhathi esifanayo, konke okwenzekayo endlini kufanele kubonwe khona. Uma leyo ndawo ikhethiwe ngokungalungile, inja ayifuni ukuyisebenzisa. Kuzodinga indawo ehlukile yokudla, kufanele kube nokuzola futhi ukhululekile, ngaphandle kwalokho kuzoqala ukuhudula izingcezu zokudla kusuka esitsheni kwezinye izindawo lapho kungaphazanyiswa ngokudla.
Ungaqali inja uma uhlala endaweni edolobheni ematasa, lapho kungekho khona ipaki elilodwa eliseduzane lapho ungahamba khona inja. Ngoba, lapho utshala isilwane, akufanele ucabange nje ngezingubo zakho nokududuza, kodwa futhi nangenduduzo yesilwane. Futhi njengoba ukuhamba kuyingxenye ebalulekile yokuphila kwezinja, ukungabi nendawo yendawo yokuhamba kuyinkinga enkulu ekuqukethwe kwenja.
Ngakho-ke, sesicabangele izizathu eziningi zokuthi kungani kungeluleki ukuba nenja. Okokuqala, lokhu kuyimfanelo enkulu, ngaphandle kwalokho, kuzothatha isikhathi esiningi ukuyikhathalela, futhi izindleko zezimali zikhulu kakhulu. Ngakho-ke, kubalulekile ukucabanga ngokucophelela ngaphambi kokuhola inja endlini. Ukulungele ukumnika cishe sonke isikhathi sakho samahhala, hamba kunoma yisiphi isimo sezulu, unakekele futhi uhlanze isilwane sakho, uqaphele impilo yakhe. Ngaphezu kwalokho, kuzodingeka isikhathi esiningi ukuphakamisa inja nokuqeqeshwa kwayo. Uma ulungele konke lokhu, hamba phambili. Kuhlala kuphela ukufisa inhlanhla.
Indlela yokudla ikati elikhulelwe
Umthelela omuhle wezilwane kubantu
Indlela yokugcoba ikati ukuqoqa izintambo
Indlela yokukhubazeka imilenze
Izinja ezidume kakhulu emhlabeni
I-Miniature Dachshund Dachshund
I-Pasta namazambane kanye nobhontshisi
Kuthiwani uma lo mfana eqamba amanga kimi?
Isobho se-Cream kusuka emanzini emifino
Okroshka on ukhilimu omuncu kanye nemayonnaise
I-Easter ihle kakhulu
I-Honeysuckle, incazelo yezinto zokwelapha
I-Autumn trend-2015: izikhwama ezimbili ngakwesandla esisodwa
Okuyinhloko kokudla okudla okuyi-kosher
I-multiple sclerosis: ukwelashwa okunye
Ungasindisa kanjani umndeni kusuka ku-monotony?
Ukuhamba nengane encane ebusika
Umqondo wangempela ngesidlo esimnandi: isaladi nge-cirri
Izimfihlo zabesifazane zokuzinakekela